မေစစ်ပိုင်| December 20, 2012 | Hits:8,935
Ko Thet December 20, 2012 - 6:59 pm ကိစ္စတခုခုအတွက် ကျေနပ်မှု မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မကျေနပ်သည်ကို အရင်ဆုံး ပြောပြသင့်ကြောင်း၊ နောက်မှသာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများ ပြုသင့်ကြောင်း
Reply ဇော်ဇော်အောင် December 20, 2012 - 7:24 pm အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပြန်လါတာအထူးကြိုဆိုပါတယ်။သု့သီးချင်းကောင်းတွေနဲ့ကျွန် တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ပျော်တယ်ဗျာ။
Reply san nay yar December 20, 2012 - 11:06 pm Dude;
Reply Hla Maung December 21, 2012 - 3:26 am All Myanmar people happy that # 1 Myanmar Singer Lashio Thein Aung come back to Myanmar and all Myanmar people welcome him 100 %. Please many stage shows in all cities in Myanmar.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 21, 2012 - 3:39 am ‘စက်ခေါင်းအမှတ် ၂၁၈’ လား။ အဲသည် သီချင်းလဲ အရမ်း ကောင်းတယ်။
Reply Shwe Yoe December 21, 2012 - 6:17 am Ko Jimmy,
Reply pnwara December 21, 2012 - 2:05 pm Black list( နာမည်မည်း-လို့ ဆိုတာထက်-နာမည်ပျက်စာရင်း) လို့ဘာသာပြန်ကြတာများပါတယ်။ သတိပြုဘို့ အကြံပြုတာပါ ခင်ဗျ-
Reply မင်းကြီးညို December 21, 2012 - 10:40 pm နှစ်ပေါင်း(၄၀)အမေရိကန်မှာနေလာတယ်။ ပြီးတော့အမေရိကန်သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ်။
Reply ဗမာ December 22, 2012 - 1:48 pm လားရှိုးသိန်းအောင်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နှစ် ၄၀ ခန့် နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း အမိမြေကို ချစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံသားအဖြစ် မခံယူခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၊ မိသားစုနှင့် ပရိသတ်များကို ပြန်တွေ့ချင်သည့်အတွက် တဦးတည်း ပြန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။